Intamo entle iphupha okanye inyaniso
I-groove ye-cross-section kwintsikazikazikazi yaseFransi yayinomsila weVenus - Collier de Venus. Omnye umcibisholo usenokwenza umhlobiso, kodwa akukho! Vumelana nentamo yakho: uyayixabisa kwaye uyayilondoloza, kwaye igcina imfihlo yakho yobudala ...
Enyanisweni, ukunyamekela intamo kudinga ngokucophelela ngaphezu kobuso. Akunzima kangako njengoko kubonakala, kodwa kusadingeka umzamo othile. Kodwa ke nawuphi na umdala kumbuzo othi "Intamo ende - iphupha okanye inyaniso?" Unokuphendula ngokukhuselekileyo "inyaniso". Uze ukhuphe isambatho esisibekela isidima sakho.
Inkwenkwezi ye-movie yaseMerika uKatherinerine Hepburn, owayejonge iminyaka engama-70 engaphelelanga engamashumi amane ngaphandle kweplastiki, wacebisa: ukuba kwakungekho imibimbi entanyeni, khangela iinkwenkwezi ngokuqhelekileyo! Xa uguqa intloko yakho, isisu esincinci kunye esincinci esincinci (platism) solule, esivela kwi-clavicles ukuya kumhlathi osezantsi. Lo msebenzi omhle kakhulu! Ekubeni ebomini bokwenene sisoloko sijonge phantsi kweenyawo, kunokuba esibhakabhakeni, akukho msebenzi okhoyo kwi platinum. Yaye ekusebenziseni ukunyanzeliswa, iyancipha, iba luvila, ihluthe kwaye iyanqanda ukunqanda isikhumba. Ngenxa yoko, iintambo ezijikelezileyo kunye nemibimbi zenza entanyeni, ubuso "bubhukuda", isibini sesibini sibonakala ...
Ulusu kule ndawo lunezondlo kwaye lukhuselekileyo kuba akukho phantse. Ngaphandle kokuba i-lubricant eveliswe ngabo, iifubeni zangaphandle zivelele kwimiphumo emibi-i-ultraviolet, umoya, ukungcola ngokweqile okanye umoya omile, ukukhutshwa kwemveliso ... Ngaba kukho into emangalisayo ukuba intamo inika iminyaka yobufazi ngaphezu kweminye imimandla yengxaki, umzekelo, izandla okanye isifuba.
Bhathathele ingqalelo kule ndawo ngokusemandleni! Kufuneka ihlambuluke, kubandakanywa ukuvuthwa kweveki (kodwa kungabikho ukutshiza, kunye neziqhamo ze-cosmetic acid AHA kwiindawo eziphantsi-ukuya kuma-5-7%), ukutya okunomsoco kunye nokunyusa.
Ngesibini ngosuku usebenzisa itywala ekhethekileyo ekunyamekeleni kwentamo kunye nendawo yokugqithisa okanye i-cream evamile (mhlawumbi kunye ne-collagen kunye ne-vitamin C), ejoliswe kwesikhumba esivamile okanye esomileyo. Yisebenzise ngokuchanekileyo, uqondise ukunyakaza ukusuka ngaphantsi ukusuka kwiziko ukuya phezulu ukuya kwimibala ecaleni entanyeni, ukuze ungalulali ulusu. Akunjalo na ke ungagcini ukhilimu ngezandla zakho - uphakamise entanyeni kunye nemikhonkco yeminwe yakho. Oku kubaluleke kunokuba ucinge.
Inkqubo yobuncinane bezonyango
Ukubethelela intamo ngekhilimu, yenza i-toning massage, ukuze ulusu lube lukhuni kwaye lube lukhulu kakhulu.
1. Kufuneka uhlale ngokuchanekileyo, unciphise amahlombe akho, pha kamisa intloko uze uyilahle kwakhona. Emva koko zama ukunyamezela iintendelezo zakho kwiindawo ezisecaleni entanyeni yakho kunye nenyameko, ngaphandle kokunyanzelisa, ukuyixabisa ukusuka emacaleni omhlathi osezantsi ukuya kuma-clavicles. Futhi swayipha ukunyakaza, ukunyanzelisa iimbambo zezandla ngaphantsi kwemisipha yentamo.
2. Ngoku ufanele "uphule" ulusu: zama ukuphosa intamo yakho ngezandla zakho ukwenzela ukuba isithupha sikhangele phambili, kwaye abanye bajongene nentloko. Qala ukuvelisa ukunyakaza okuqhelekileyo ukuhamba kweminwe ngeminwe yakho, ngelixa uhamba ngokukhawuleza.
3. Beka intamo entanyeni nasemva kwentloko ukusuka phezulu ukuya phezulu, emva koko.
4. Kubaluleke kakhulu ukunweba imisipha yomlomo ngesandla sokunene kwicala lasekhohlo kunye nangoko. Hlaza umsila phakathi kweengqumbo zezithupha kunye nabanye abane kwaye uyigqubuthe ngokuhamba.
5. Nciphisa intloko yakho, mayeke umgca weenkcukacha kunye neminwe ephakathi yesandla sakho sokunene uzive u-bony protrusion (inkqubo ye-spinous ye-vertibra yesi-7 yomlomo wesibeleko) apho umva uswela entanyeni nomgodi phantsi kwayo. Ukucoca ngokukhawuleza kule ndawo. Emva koko fumana umncinci omncinane kwenye i-vertebra evelele (i-thoracic yokuqala), kunye nomgodi ongaphantsi kwayo kwaye uphinde uhlaziye. Ukugqiba inkqubo efanelekileyo, ngokukhawuleza ukubetha phambili, emva nangemacala yentamo.
Imisebenzi yokucoca i-cream ecocekileyo iyanceda kangcono xa emva kokusebenzisa ngokuhlwa kusibuyisela lula ukucola kwentamo ngokuphucula i-recipe ye-Japanese cosmetologists.
1. Okokuqala, cinezela iingcebiso zeminwe ephakathi kumaphuzu adibeneyo kwi-subclavian fossa (khangela phantsi kwe-clavicles kwi-grey yobude bayo). Bala ukuya kwiintathu kwaye ukhulule.
2. Ukubetha entanyeni ngephakathi, isicatshulwa uze ufake iminwe yezandla zombini ngexesha elinye. Phuma nge-back side, ngomgudu omncinci, kwaye wehla ngaphaya ngeminwe yeminwe yakho. Phinda amaxesha ama-5-6.
3. Gqugquzela isicatshulwa somnwe ophakathi phakathi kwesentya apho uwela khona. Emva kokuqakraza kwinqanaba, zibalo ezintathu, uze ukhulule, ulinde kancane uze uzame kwakhona.
Ulusu entanyeni luya kuqiniswa, kwaye imibimbi iya kuqala ukugqithisa emva kweentsuku ezingama-5-6 zeendlela eziqhelekileyo zokungafani - uhlobo oluthile lwe-gymnastics kwimpahla engaphantsi.
Ngaphambi kokuba uhlambe ekuseni, amaxesha okuqala ama-20 ukuya ku-30 ​​ukuya ku-30 ​​ukuya ku-30 ​​ukuya ku-20 ukuya ku-40.
Musa ukulibala ngokunyanzeliswa okutshisayo - kufuneka basebenziswe ngalunye usuku emlonyeni wesikhumba esicocekileyo kakuhle.
1. Gcoba ingcezu yelinen yelinen okanye uluhlu lwegreyze olufakwe emigqeni emininzi ngamanzi atshisayo, yifake kakuhle kwaye ubambe ebusweni bakho nentamo imizuzu emi-5. Emva koko uhlambe ngamanzi apholileyo.
2. Nsuku zonke, sulela ubuso bakho nentamo yakho ngebhodi yekotoni exutywe ngamanzi anosawoti kwiqondo lobushushu (1 ithisipuni nganye kwiglasi). Gubha itileni yelineni kwisisombululo uze uhlaziye ngokuchukumisa ngokusesikweni kwinqanawa.
Yenza imisebenzi emithandathu elula kwi-recipe kaKatherine Hepburn ngelilanga. Ukuba uyaziphinda rhoqo, awudingi naluphi na umgca wecala lobuso kunye nentamo yentamo!
Phindela intloko yakho kwaye uphumele impumlo yakho kunye neelwimi lwakho.
Ukubamba intloko ngqo, phakamisa umhlathi osezantsi uze uvale umlomo ophezulu wezantsi.
Smile kangangoko kunokwenzeka, zibalo ezine. Nciphisa iikona zomlomo wakho phantsi kwaye unqande intamo yakho. Bala ukuya kwezine uze uphumule.
Dlulela iingalo zakho, uzibeke emhlane emva kwentloko uze uzicinezele entloko yakho: vumela imisipha yentamo ixinzelele olu xinzelelo!
Gcoba iminwe phantsi kwesikhumba uze ucindezele kuzo ngamacala omva, kwaye intloko nentamo ifanele ukuxhathise lo xinzelelo.
Thetha kwisisu sakho, welula iingalo zakho, uphakamise umzimba kwaye utyumle intloko yakho kude kunokwenzeka. Phinda amaxesha angama-6-8.
Nangona ujwayele ukucoca kwi-krimu entanyeni, oku akuthethi ukuba uhlawula ngokwaneleyo. Kuthiwani ngamaski? Uninzi lwethu lubabeka nje ebusweni kuphela, kwaye sikhuthele intamo. Kodwa nangona ungayikhohlwa malunga nalo, akuthethi ukuba wenza konke okulungileyo. Ummandla onobubele kunye neengqungquthela awunasoloko ulungele zonke iimpawu zobuso! Ewe, oku kuyinyani. Ukugqithisa kunye nokuqhathanisa, okusetyenziswa kwi-oily, edibeneyo okanye enengxaki yesikhumba, intamo iyaphikiswa ngenxa yokuba yome kakhulu, ilahla ifilimu yokukhusela i-hydro-lipid. Apha ufuna iimveliso ezikhethekileyo - ukubuyisela umlinganiselo wokunyusa, ukondla, ukuthambisa kunye nokucola. Zithenge kwikhemisi okanye upheke ekhaya.
1. Gcoba iipuniji ezi-2 zobusi kwindawo yokuhlambela ngamanzi, uthele kwiincinci ezimbini zeepunile uze ufake isikhupha seqanda. Hlanganisa umxube obangelwayo, whisk kwaye usebenzise ubuso kunye nentamo kwisigamu seyure. Hlanganisa ngamanzi apholileyo.
2. Phalaza amanzi abilayo ngaphezu kwezipuni ezi-3 zeentyantyambo ezinomileyo okanye ezitshatywayo, zipholile, zidibanise "i-steamed" (iintyatyambo ezinamanzi) kunye nepunipoon yobusi, i-yolk enye kunye ne-teaspoon yiphina ioli (ikhethekileyo ioli yeoli). Faka isicelo umxube ebusweni nasentanyeni yakho nge-cotton swab imizuzu emi-5-10. Musa ukuvumela ukuma!
3. Impembelelo enobungozi entanyeni yokugubha amazambane, okufuneka agcinwe imizuzu engama-20.
Ubilise ii-litate ngendlela efanayo, uyigwebise kwi-peel, hanya ne-teaspoon yeoli yeoli kunye ne-glycerin. Ukuba i-glycerin ayikho, i-triple dose yeoli. Kwaye unokuxubusha amazambane afudumele kunye neqanda elibethiwe. Beka umxube kumgca we-gauze elayini, wimboze entanyeni yakho uze uyigubungele ngephepha lesikhumba. Emva kokususa i-mask, supha intamo ngamanzi afudumele kwaye ugcoba nge-cream egcinayo. Unentamo ende!
I-Gymnastics evela kwi-chin
Ngaba ufuna ukuba kungabi khona? - Qeqesha imisipha yentamo: xa besebenza ngamandla, amanqatha akanalo ithuba lokuhlala kwindawo engafanelekanga. Impumelelo yeeklasi iya kuba yinto ebonakalayo xa uqala ukuqhubela phambili emithathu emanzini. Khumbula xa uhlamba okanye ugibele elameni. Okanye unokuthulula amanzi aphekiweyo kwisitya esikhulu kunye ne-tea brew okanye ukumnika umtya, i-celandine, i-chamomile okanye inja. Gcoba phantsi kwesikhokelo kulo mbhobho uze uqale ukuzivocavoca.
Phuma emlonyeni wakho, ucinezele ngokugqithiseleyo iimbombo zomlomo wakho kumazinyo akho. Ukubala ukuya kwi-10, ngokukhawuleza uqale ukuqinisa umlomo kwiziko. Kwaye ngoku uhambisa imilenze ecindezelekileyo amaxesha amahlanu ukuya ngasekunene nasekunene. Ngaba uziva iimisipha zentamo kunye neenki ziqinisa? Ngoku unako ukuphumla kwaye ubambe izandla zakho ebusweni ukusuka phezulu-oku kuya kunceda ukukhulula ukuxhatshazwa.
Zama ukuvula umlomo uze uthe "ixesha elide", ngaphandle kokulula kwaye ungacacisi umlomo wakho ngexesha elifanayo. Kwavela? Kwaye ngoku ke ubale engqondweni ukuya kwi-15 kwaye, ngaphandle kokufuduka, uvale umlomo wakho ngokukhawuleza. Ngeke ukwazi ukwenza oku kude kube sekupheleni - umlomo uya kuhlala u-ajar. Kufuneka uhlale kule ndawo, ubale ukuya ku-10. Emva kokuba umsebenzi uhle kakuhle, phinda kathathu ngosuku.
Ukuqhawula iminyango ngokuqinileyo, welula umlomo ophantsi kangangoko kunokwenzeka. Bala ukuya ku-15. Umsila ongaphantsi kwintamo-iplatinum iya kulula! Hlaziya, kwaye uzama ukululaza zombini umlomo kanye. Phinda inkqubo.
Zama ukukhwaza imilomo imizuzwana emi-5-10, ucinezele ngokugqithiseleyo iingcongolo zomlomo kumazinyo.
Emva koko gxumela izihlathi zakho ngokungathi unzima, vala umlomo wakho kwaye uqale ukuhambisa umoya kwisangqa - ukusuka esitini lesobunxele ngaphezu komlomo ophezulu ukuya kwesitrha sokunene nangaphantsi komlomo ophantsi ukuya kwesitekini sekhohlo. Emva koko umqubuze intloko yakho kwakhona uze uqale umoya ophefumulayo. Khawucinge nje uvuthela uhlanga oluthuli. Phinda kwakhona ama-3-5.
Beka izibhambathiso zakho phezu kwetafile kwaye, ngomlomo wakho ucindezelwe kunye nombhobho, qinisa umhlathi. Kubalulekile ukuhambisa iminwe evaliweyo yeentendelezo ukusuka ngaphantsi ukuya phezulu emlanjeni ukusuka kumacala amabini ebusweni. Ngokwenza njalo, musa ukulibala ukucinezela ngokukhawuleza kwiimisipha ezinomsi. Emva koko kufuneka uhlaziye izihlathi zakho kwindlela eya emlonyeni wakho. Ngokufutshane ukuya ekupheleni kufuneka udibanise izihlathi zakho ngezandla zakho kwaye ubalekele ku-10. Hlaziya. Ungapheli ubuso bakho nentamo kaninzi.
Kwesikhumba sentamo yahlala i-elastic kwaye ingenakunyuswa kwiinguqu ezinxulumene neminyaka, umntu makabe ephakamileyo intloko, egcina ukuziphakamisa. Ngaloo ndlela uhlala unomdla onomtsalane omhle-iphupha okanye inyaniso yowesifazane oyinyaniso. Ukusebenza kwikhompyutheni ayinakunceda ukuba uphucule - uthayibhile phantsi itekisi phantsi kobuso bakho, kwaye xa uziqhekeza ngaphandle kwebhodibhodi, ubeka isandla sakho kwiskrini uze udibanise ngokucacileyo; Okubi nakakhulu, xa kufuneka usebenze phantsi kwexesha uxinzelelo okanye phantsi kwengcinezelo yomntu: iimeko ezixinzelelekileyo zibangela ukuba imisipha yentamo ixakeke, nto leyo ebangela ukuba i-posture iphazamiseke kwaye i-vertebrae iphosakele. Konke oku akuyona ndlela efanelekileyo yokuchaphazela imeko yesikhumba!
Nika "uqeqesho" olunjalo entanyeni okungenani imizuzu emi-5 kusasa nangokuhlwa, uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde uphinde ulandelele. Ukuba umyalelo wokuhamba awucaciswanga ngokwahlukileyo, ke wenze konke ukusuka phezulu: ukusuka emngceleni wokukhula kweenwele kumxhelo. Awudingi ukucoca entanyeni ngeentendelezo zecala nangaphambili: zidlula iinqanawa ezibalulekileyo, emva kokucima ukuba ungabangela ukulahlekelwa kwengqondo. Futhi ungakulibali ukubukela umoya: kufuneka ube nesigqi, ukuzola, ngaphandle kokulibaziseka.
1. Phula intloko yakho phambili, udonsa imisipha yakho emqaleni. Kanciphisa ngokukhawuleza, ukudonsa phambili. Phinda uphindwe kabili. Lo msebenzi uyanceda ngokusesikweni sesibini!
2. Faka izandla zakho ngasemva kwentloko yakho. Nciphisa intloko yakho kwaye ubalekele ku-10. Buyela kwisithuba sokuqala.
3. Ukubamba intloko yakho ukusuka phezulu kunye nesokunene (isundu ukuya kwesobunxele kwindawo yesithsaba nethempile). Beka isandla sakho sekhohlo phantsi. Gxotha intloko yakho ngakwesokudla, udonsa imisipha yentamo, kwaye ubalekele ku-10. Buyela kwisikhundla sokuqala uze uphinde uphinde, wenze okufanayo kwinye isihlandlo amaxesha ama-2.
4. Yenza ujikelezo olubanzi kunye nolutyebileyo lweentloko, ulula izihlunu zentamo kunye nebhinqa legxala. Emva kokugqiba enye ukujika kwesoloko, phinda into efanayo nxamnye nayo - amaxesha ama-2 kuphela. Zama ukuhamba ngokulula ngokusemandleni. Ngoko umthwalo kwimisipha uya kuba mkhulu.
Indlela yokujongana neenguqu ezinxulumene nesikhumba
Indlela yokuthatha ishawa, ukuba ungumfazi?
Ngaba kufuneka ndiyenze i-liposuction ukususa amaninzi amaninzi
Ukuzivocavoca kwezandla ezintle
Uphulo oluhle olunokugcinwa ixesha elide
Yintoni indoda eyatshatileyo eyayenza xa yayithandana?
Yintoni anokukwazi ukuyiphuza ngexesha lokukhulelwa?
Indlela yokuphumla eSpain wedwa
Igumbi lePalma lihamba
Indlela yokukhetha iliso lomntwana?
Umntwana wesibini kwintsapho: njani ukulungiselela umdala?
I-Frosty blush iyi-"yasemaphandleni" ubuhle bobuhle bezixeko
Indlela yokomeleza intliziyo emva kokuxinzeleleka kwengozi
Indlela yokusebenzisa kakuhle iveki